お年玉 Otoshidama/နှစ်သစ်မုန့်ဖိုး အကြောင်းသိထားသင့်တဲ့ အချက် ၁၀ ချက်။ - JAPO Japanese News
စ 01 Jan 2022, 23:07 ညနေ
お年玉 Otoshidama ဆိုတာဘာလဲသိပါသလား?
လွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်သစ်မှာကလေးတွေကို မုန့်ဖိုးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမုန့်ဖိုးပေးခြင်း Otoshidama ဟာ ဂျပန်ရဲ့နှစ်သစ် ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင်ဟာလက်ရှိ ဂျပန်မှာနေသူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ဒီယဉ်ကျေးမှုကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဂျပန်ရဲ့နှစ်သစ်ကြိုဆိုခြင်းအစိတ်အပိုင်းအနေနဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်းဟာ ကလေးတွေကိုနှစ်သစ်မုန့်ဖိုးပေးကြပါတယ်။ ဒီအတွက်ကလေးအများစုကလည်း နှစ်သစ်မှာတောင့်တတဲ့အရာက အစားအသောက်ကောင်းတွေ၊ မိသားစုပျော်ရွှင်စွာအချိန်ကုန်ဆုံးခြင်းတွေမဟုတ်ဘဲ၊ သူတို့လိုချင်တဲ့အရာက Otoshidama သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် နှစ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Otoshidama အကြောင်း အချက် ၁၀ ချက်ကို ပြောပြသွားပါမယ်။
၁။ Otoshidama ရဲ့သမိုင်း
Otoshidama ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာ kagami mochi (rice cakes)ကနေဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ kagami mochi ကတော့ နှစ်သစ်မှာကြွလာမယ့် နှစ်သစ်နတ်ဘုရား (toshigami-sama) အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးတုန်းက rice cakes အသေးလေးတွေကို toshidama လို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ မိဘတွေဟာ ကလေးတွေကို အဲ့ဒီဆန်ကိတ်မုန့်အသေးလေးတွေကို ပေးလေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ အဲ့ဒီဆန်ကိတ်မုန့်နေရာမှာ သစ်သားရုပ်အသေးလေး၊ စက္ကူရုပ်အသေးလေးတွေကို အစားထိုးပြီးပေးခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီကနေ ခေတ်တွေကူးပြောင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ အရုပ်အစား ပိုက်ဆံပေးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သွားပါတယ်။
၂။ ကျောင်းနေတဲ့အရွယ်ကလေးတွေကိုသာ မိဘ၊ အဖိုးအဖွား၊ ဦးလေးအဒေါ်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့မိသားစုဆွေးမျိုး အိမ်နီးချင်းတွေက Otoshidama ကိုပေးကြပါတယ်။
၃။ ဂျပန်ကလေးတွေဟာ ပျှမ်းမျှအားဖြင့် လူ ၅ ဦး(သို့မဟုတ်) ၆ ဦးကနေ Otoshidama ကိုရကြပါတယ်။
၄။ ပျှမ်းမျှပမာဏအားဖြင့်တော့ စာအိတ်တစ်အိတ်ကို ၅၀၀၀ ယန်းရရှိပါတယ်။
၅။ ပေးတဲ့အခါမှာလည်း ငွေရဲ့ပမာဏဟာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုနဲ့ အသက်အပိုင်းအခြားပေါ်မူတည်ပြီး ပေးပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပျှမ်းမျှအားဖြင့် မူလတန်းကလေးဆို စာအိတ်တစ်အိတ်အတွက် ယန်း ၂၀၀၀ ကနေ ယန်း ၃၀၀၀ ဖြစ်ပြီး၊ အလယ်တန်းကလေးအတွက်ကတော့ စာအိတ်တစ်အိတ်ကို ယန်း ၅၀၀၀ ပေးပါတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းသားကိုတော့ စာအိတ်တစ်အိတ်မှာ ယန်း ၁၀၀၀၀ ထိပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုရှိတာကတော့ ယန်း ၄၀၀၀ တို့၊ ယန်း ၈၀၀၀ တို့က နိမိတ်မကောင်းတဲ့ နံပါတ်တွေဖြစ်တာကြောင့် မပေးကြပါဘူး။
၆။ အရမ်းငယ်ပြီး ကျောင်းမနေသေးတဲ့ကလေးတွေကိုတော့ ပိုက်ဆံမပေးဘဲ၊ အရုပ်တွေသာ လက်ဆောင်ပေးကြပါတယ်။
၇။ ကောလိပ်တက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်း Otoshidama ကိုရတတ်ကြပါတယ်။
၈။ ပိုက်ဆံကိုတော့ プチ袋 Puchibukuro ဒါမှမဟုတ် Otoshidama bukuro လို့ခေါ်တဲ့ စာအိတ်သေးသေးလေးထဲမှာ ထည့်ပြီးပေးပါတယ်။ ထိုစာအိတ်တွေကိုတော့ ကလေးတွေသဘောကျလောက်မယ့် နှစ်သစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေ၊ စာလုံးလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားပါတယ်။ စာအိတ်တွေကို convenience စတိုးတိုင်းမှာ ရောင်းချပါတယ်။
၉။ နောက်ထပ်သတိထားရမယ့်အချက်ကတော့ ဒီစာအိတ်တွေကို အခြားလူတွေရှေ့မှာ ဖွင့်ဖောက်ခြင်းက မယဉ်ကျေးတဲ့အပြုအမူလို့ ယူဆကြပါတယ်။
၁၀။ နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ ဂျပန်ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့နှစ်သစ်မုန့်ဖိုး Otoshidama ကိုအများဆုံးအသုံးပြုကြတဲ့နေရာကတော့ (၁)ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ (၂)မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းနှင့်သီချင်းများ (၃)အဝတ်အစား၊ စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလေးစီထားတာလဲ? ဂျပန်မှာ ပြသမှုအတွက်လည်း နတ်ဘုရားရှိနေပုံပါပဲ
Bonsai လေးတွေ လုပ်ကြည့်ရအောင်!!!!!